Voly katsaka any Atsimo : Atahorana hopotehin’ny lolokely mpanimba voly” -
AccueilSongandinaVoly katsaka any Atsimo : Atahorana hopotehin’ny lolokely mpanimba voly”
Voly katsaka any Atsimo : Atahorana hopotehin’ny lolokely mpanimba voly”
05/01/2018 admintriatra Songandina 0
Tandindomin-doza ny voly katsaka any Atsimon’ny Nosy. Nandritra ny fitiliana sy ny fikarohana, tany amin’ny faritra Atsimo andrefana, dia nahitana bibikely Lolo mpifindramonina, na antsoina amin’ny frantsay hoe « chenille Légionnaire d’automne », ary omena anarana ara-tsiansa hoe « Spodoptera Frugiperda », ka tao amin’ny kaominina Antanimieva sy Milenaka no nisy azy ny fiandohan’ny volana novambra 2017. Ity bibikely ity, izay manimba voly kokoa noho ny valala. Fantatra fa tany Amerika no nahitana voalohany azy io. Miavaka amin’ny voka-dratsy ataony ny fanimbana voly, indrindra fa ny voly katsaka. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny alalan’ny fifanakalozana ara-barotra, izay misy ifandraisana amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro ny firoboroboany, ka tonga taty Afrika, ary nihanaka tamin’ny firenena afrikana maro nanomboka ny taona 2016 ity bibikely mpanimba voly ity, ary izao tonga eto Madagasikara izao. Tena tandindomin-doza noho izany ny fambolena satria ho potika ny sosialim-bahoaka raha tsy voafehy ara-potoana izany. Raha ny tranga tany amin’ny firenena Mali izao no alaina ohatra, voly mahatratra 200ha no indray simba tao anatin’ny indray mipi-maso, noho ny nafitsok’ity lolokely mpifindra monina ity.
Tsara ny manamarika fa taorian’ny volana febroary 2017, noho ny tantsoroka nataon’ny sampandraharahan’ny Firenena Mikambana misahana ny Sakafo sy ny Fambolena na ny FAO, amin’ny alalan’ny tetikasa ASTF/FAO sy ny fiaraha-miasa amin’ny SADC, dia efa nandray fepetra mifanaraka amin’izany ny governemanta malagasy. Efa nisy ny fiofanana nataon’ireo teknisianina mba hiomanana amin’ny tokony hatao momba io bibikely io, ary nampiharina taorian’izay ny fepetra ifehezana ny fielezany. Anisan’izany ny fanofanana sy ny fanentanana ary fanairana mialohan’ny fotoana ireo mpamokatra, ny mpikaroka, ny teknisiana sy ny mpiasan’ny sampandraharaha misahana ny fiarovana ny zava-maniry. Natao araka ny fenitra enti-mikarakara ny zava-maniry, voalaza ao amin’ny fifanarahana iraisam-pirenen’ny fiarovana ny zava-maniry sy izay takian’ny sampandraharaha eran-tany momba ny varotra, mba ahafahana manome antoka ny fiantohana ara-tsakafo, ao anatin’ny fifanarahana momba ny fahasalamana, sy ny fikarakarana ny zava-maniry sy ny fiarovana azy amin’ny fahavalony izany. Natsangana ny fifandraisana maharitra, na ho an’ireo firenena voakasik’ity loza ity, na ny sampandraharaha iraisam-pirenena mba ahafahana mifanakalo fampitam-baovao momba ireo enti-manana amin’ny ady mahomby sy mandaitra.
Efa mandray andraikitra…
Amin’izao fotoana izao, ny fitondram-panjakana, amin’ny alalan’ny minisitera eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika misahana ny Fambolena sy ny Fiompiana, izay misy ny sampandraharaha mpitantana ny fiarovana ny zava-maniry dia miasa amin’ny toerana ahitana ity bibikely mpandrava voly ity, ho fisorohana sy ho fitantanana ny loza mety hitranga ara-pahasalamana sy ny fikarakarana ny zava-maniry, izay tsy afa-misaraka amin’ny famokarana, ary ao anatin’ny fiaraha-miasa akaiky amin’ny fitantanam-paritry ny fambolena sy ny fiompiana sy ny mpamokatra. Ankoatra izany, natsangana ihany koa ny drafitr’asa eo anivon’ny SADC sy eto an-toerana mba hiadiana amin’io bibikely mpandrava voly io, isan’izany ny fanaparitahana ny fomba hamantarana azy, ny fomba fiady amin’ny alalan’ny fandrika isamborana ilay bibikely manidina, ny fampiasana fanafody mandaitra mamono ny bibikely mpanimba ny voly. Misy koa ny andrana atao amin’ny fampiasana ny ady mikajy tontolo iainana, na ny ady mampiasa akora biolojika amin’ny alalan’ny vokatra avy amin’ny fikirakirana zava-maniry.